दुर्गमका अशक्त लाभग्राही भन्छन्ः घरमै आएर बैंक खाता खोलिदेउ ! « Emakalu Online
दुर्गमका अशक्त लाभग्राही भन्छन्ः घरमै आएर बैंक खाता खोलिदेउ !
अघिल्लो चौमासिकमा लाभग्राहिको घरमा पुगेर वितरण गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ।
खाँदबारी । जिल्लाको सिलिचोङ गाउँपालिका ३ ताम्कु सिकिदिम गाउँबाट गाउँपालिकाको केन्द्र ताम्कु आईपुग्न पुरै एक दिन लाग्छ । यहाँका ८३ बर्षका पहलसिं राईले आफुले पाउने बृद्धभत्ता लिन अब गाउँपालिकाको केन्द्र ताम्कुमा रहेको बैंक पुग्नु पर्ने भएको छ । कोहि पनि परिवारको सदस्य नभएको बृद्ध राई बैंकसम्म आईपुग्न असम्भव छ ।
सिकिदिम गाउँका बृद्ध राई मात्र होईन भौगोलिक विकटता भएको गाउँहरुमा सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनिबार्य बैंकिङ प्रणाली ब्यावहारिक नभएको लाभग्राहिहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । दिनभरि घण्टौ हिडेर बैंक पुग्न नसक्नेहरुका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित बैंकहरुले सहजिकरण गर्नु पर्ने अशक्त जेष्ठ नागरिकहरुको माग छ । अति अशक्तहरुका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग बैंकले समन्वय गरि लाभग्राहिकै घरमा पुगेर खाता खाल्ने ब्यवस्था गरे सहज हुने मकालु गाउँपालिकाका ७२ बर्षीय सुकमाईती राईको भनाई छ ।
यस अघि जनप्रतिनिधी, टोल संयोजक र कर्मचारीहरुले लाभग्राहिकै घरमा पुगेर भत्ता वितरण गर्दै आएका थिए । आफुहरु बसिरहेकै ठाउँमा प्रत्यके ४ महिनामा आउने भत्ता अब बैंकमा लिन जान समस्या भएको सभापोखरी गाउँपालिकाका ८८ बर्षका बीरमान लिम्बुले बताउनुभयो । बैंकसम्म पुग्नका लागि कसैले बोकेर पुराए मात्र सम्भव रहेको लिम्बुको भनाई छ । ‘सहरमा जस्तो गाडी चल्दैन, केटाहरुलाई बोकाएर बैंक जानु कि भत्ता माया मार्नु पर्ने हो’, लिम्बुले भन्नुभयो ।
बैंकसम्म आउनै नसक्नेहरुका लागि उनीहरुको घरमै पुगेर खाता खोल्न सकिने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक खाँदबारी शाखाका मेनेजर अनिश रायमाझीले बताउनुभयो । यसको लागि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिने समेत मेनेजर रायमाझीको भनाई छ । केवाईसी फारम लगेर बैंकका कर्मचारी अशक्तहरुको घरघरमा पुगेर खाता खोल्न सकिने रायमाझीले जानकारी दिनुभयो । भुक्तानी लिनको लागि पनि सम्बन्धित लाभग्राहिले ईच्छाएको ब्यक्ति मार्फत लिन सकिने गरि खाता खोल्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘खाता खोल्दा लाभग्राहिले ईच्छाएको ब्यक्तिको पनि फोटो र हस्ताक्षर राखेर खाता सञ्चालन गर्न सकिन्छ, पछि पैसा लिन ईच्छाएको ब्यक्ति मात्र आए पुग्छ’, मेनेजर रायमाझीले भन्नुभयो ।